शारीरिक सम्बन्धका बेला पुरुषलाई यी यस्ता व्यवहार मन पर्छ…
जीवन जगत चलाउन यौनको मुख्य भूमिका रहन्छ । आफ्नो चाहाना पुरा गर्नु भन्दा पहिले सन्तान उत्पादन प्राप्ति गर्नु यौन भन्ने बुझिन्छ । विपरित लिङ्ग प्रतिको आकर्षण हुनु प्राणीको स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
पार्टनरबीच ससर्ग हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । तर, कति को सन्तुष्टि अनुभूति गर्न सक्छन । कतिको रोमान्स गर्न सक्छन भन्ने कुरा उनीहरुको क्रियाकलापमा भर पर्छ । त्यस्तै सम्बन्ध राख्ने बेलामा पुरुष अथवा महिलाले गर्ने व्यवहारले पनि यौनमा फरक आनन्द प्राप्ति गर्दछन ।
महिला अथवा पुरुषले यौनका बेला के चाहन्छन । एक अर्काको भावनालाई बुझ्न सकियो भने भरपुर् आनन्दी प्राप्त गर्नु कुनै संकोच रहदैन । यी सेक्स टिप्स महिलाका लागि हो जो आफ्नो पार्टनरलाई सेक्शुअली मात्रै नभई इमोशनली पनि आनन्दी दिन सक्छन्:
तीमि निकै सेक्सी छौं
सेक्सी शब्द सामान्यतया महिलाका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । पुरुषलाई भने कम्प्लिमेन्ट हासिल गर्ने निकै कम मौका प्राप्त हुन्छ । यी सबका बाबजुद फिमेल पार्टनरले चाह्यो भने आफ्नो मेल पार्टनरलाई सेक्सी र हट भनेर उनको सेल्फ कन्फिडेन्टलाई बढाउन सक्छन् ताकि बेडमा उनको परफरमेन्स झन राम्रो हुन सकोस् ।
म केवल तिम्रो हुँ
पुरुषलाई बेडमा पूरा अधिकार हुन्छ र उनी जो चाहन्छन् त्यो गर्न सक्छन् ? के यो भन्दा बढि र कुनै यस्तो कुरा छैन जसले पुरुषलाई अझ एकसाइटेड बनाउन सकोस् ? होइन । म केवल तिम्रै हुँ भन्ने वितिकै मेल पार्टनरको एक्साइटमेन्ट बढेर जान्छ र फेरी फाइदा तपाईं कै हुन्छ । किनकी तपाईंको यति मात्र शब्दले पुरुषलाई तपाईंको केयर गर्ने र तपाईंलाई चाहिने सन्तुष्टि दिन उनीहरु पुरै केयरका साथ परफर्म गर्छन् ।
तपाईं मलाई क्लाइमेक्स सम्म लिएर जान सक्नुहुन्छ
सेक्सको क्रममा कुनैपनि पुरुषका लागि यो सुन्नु कुनै परफेक्शन भन्दा कम हुँदैन । तपाईंको क्लाइमेक्स सम्म लिएर जानका लागि उनी जे पनि गर्न तयार हुनेछन् । किनकी महिला पार्टनरको अर्गेज्म फिल गरेको देख्नु भन्दा राम्रो अरु केहि हुनै सक्दैन ।
यो अहिले सम्मको बेस्ट सेक्स थियो
यो भन्नु एक प्रकारले आफ्नो पार्टनरलाई सेक्सको लागि ट्रफी दिनु समान हो । जुन पनि बेला सेक्स सेशनपछि सन्तुष्टि महसूस हुन्छ र तपाईं राम्रो महसुस गर्नु हुन्छ भने पार्टनरलाई यो विषयमा कुरा गर्नुस् । ताकि उनलाई एक्सट्रा स्पेशल महसूस हुनेछ । याद रहोस की पार्टनरले तपाईंको खुशिको लागि पनि धेरै कुरा गर्ने गर्छन् ।
मलाई अझ चाहियो
यदि तपाईंलाई सेक्स गर्ने समय सन्तुष्टि प्राप्तीको अनुभव भएको छैन र तपाईं अझ केहि समय गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ भने पार्टनरसँग बिना कुनै संकोच कुरा सेयर गर्नुस् । मेल पार्टनरका लागि यो भन्दा बढि सन्तुष्टिको कुरा अरु केहि हुन सक्दैन की उनको परफरमेन्स तपाईंलाई यति मन पर्यो की तपाईं अझ सेक्स गर्न इच्छुक हुनुभयो ।
(कामसुत्र कितावमा प्रकासित)
तेह्रथुमको लम्बु खोलामा पुल निर्माण सम्पन्न